Digital Marketing Summit 2017 Registration, Sun, Oct 1, 2017 at 1:00 PM | Eventbrite
Sun, October 1, 2017, 1:00 PM – 5:00 PM Myanmar Time Myanmar (Burma) Time
1:00 PM – 5:00 PM Myanmar Time Myanmar (Burma) Time
Nowadays, communication and the usage of internet in Myanmar are dramatically increasing, and so, entrepreneurs and people from business world prefer digital marketing to traditional marketing to run their business. Moreover, youths are trying to be the professional digital marketers as most of the companies and organizations are looking for these kinds of professionals.
The very first “Digital Marketing Summit 2017” in Myanmar is the event which can give much knowledge about Digital Marketing, and so, people who would like to attend this event have to register from the following link. The people who can attend this event will be informed as there are seat limitations in this event.
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍတိုးတက်လာခြင်း ၊ အင်တာနက်အသုံးပြုသူ လူဦးရေတဟုန်ထိုးများပြားလာခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေဟာ သမရိုးကျ Marketing နည်းလမ်းများမှ Digital Marketing သို့ကူးပြောင်းကာ လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်။ Digital Marketing အလုပ်အကိုင်များကို ကုမ္မဏီများက ဦးစားပေးခေါ်ယူလာကြသလို လူငယ်များကလည်း Professional Digital Marketer တစ်ယောက်အဖြစ်ရပ်တည်ရန် ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာကြပါတယ်။
Digital Minds Marketing Agency မှ ဦးစီးပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဦးဆုံး Digital Marketing Summit 2017 ပွဲကြီးကို ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲတွင် ထိပ်တန်း ကုမ္မဏီအသီးသီးမှ Head of Digital များ ၊ Social Media Influencers များက Digital Marketing အကြောင်းကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပါဝင်ဆွေးနွေးသွားမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Digital Marketing Summit 2017 ပွဲသည် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ စွန့်ဦးတီထွင်သူများ၊ Brand Manager များ၊ Marketing Manager များ၊ Digital Marketing ကိုစိတ်ဝင်စားသူ လူငယ်များ Digital Marketing အကြောင်းအရာများကို ပိုမိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သိစေဖို့ တက်ရောက်သင့်တဲ့ ပွဲဖြစ်ပါတယ်။
နေ့ရက် ။ ။ အောက်တိုဘာလ ၊ ၁ ရက် ၊ ၂၀၁၇ (တနင်္ဂနွေနေ့)
အချိန် ။ ။ နေ့လည် ၁ နာရီ မှ ညနေ ၅ နာရီ
နေရာ ။ ။ Summit Parkview Hotel ၊ ရန်ကုန်မြို့
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဦးဆုံးသော Digital Marketing Summit 2017 ပွဲဟာ Digital Marketing ဆိုင်ရာ အသိပညာများစွာ ရရှိမယ့် ပွဲကြီးဖြစ်လို့ တက်ရောက်လိုသူများအနေနဲ့ ပထမအဆင့်အနေဖြင့် အောက်ပါလင့်ခ်မှတဆင့် Register ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခုံအရေအတွက် သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တာကြောင့် တက်ရောက်ခွင့်ရသူများကို ပြန်လည်အကြောင်းကြားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Digital Marketing Summit 2017 at Summit Parkview Hotel
International Business Center (IBC), Yangon